Umgogodla ophilile awuqondile ngqo. Uma ibhekwa kusuka ohlangothini, inezinsimbi ezine. Lezi zibopho ziwumphumela wokuziphendukela kwemvelo, ziyisisekelo sesimo esiqondile somzimba womuntu. Isivunguvungu esilandelayo somgogodla sabizwa nge-scoliosis. Kungenzeka ukuthi wayeyisakhiwo noma esebenzayo. I-scoliosis esebenzayo ayitholakali, kepha isifo esihambisana nezifo eziningi, isibonelo, i-sciatica (i-lesion ye-gluteal nerve kanye nokuhlala okude isikhathi eside kwezinye izikhundla). Ngokuvamile leli fomu le-scoliosis lithinta umgogodla we-lumbar ne-thoracic, futhi ukuvinjelwa cishe kuhlale kunesimo esifana nesimo se-S.
Nge-scoliosis ehleliwe, kunezinguquko eziphilayo ezikhona kukholomu ye-vertebral kanye nezinsiza zayo ezisekelayo. Ngenxa yabo, ukuguqulwa kwemigqa ye-vertebrae ne-intervertebral diss kwenzeka, futhi umgogodla ogobile uthola ukuma kwekhava elifana ne-S. Ukuqhathaniswa kwesibalo salolu hlobo aluvamile. Yiqiniso, ukuvuthwa ngokuvamile akubalulekile, ngakho akubanga imbangela yesiguli esingathandeki.
1. Isivunguvungu esilandelayo somgogodla
2. Ubuhlungu obukhulu obungemuva ngemuva kokukhulelwa
Ukuguqulwa komgogodla kubangelwa ukuphazamiseka kokuthuthukiswa kwama-vertebrae kanye nezimbambo, izicubu zomzimba kanye nezixhobo zomzimba, kanye namapulangwe. Ngokuvamile, i-scoliosis ivela ngenxa yokuhlala okungalungile esikhungweni sezikole. Ukuvuthwa komgogodla kungabangela ukukhubazeka, ukuhlukana, izifo ezithile, ikakhulukazi i-spondylitis enezigaxa. Abantu bezobuchwepheshe abathile baxhomeke ekuzileni kwe-scoliosis, isibonelo, ama-violinist, ukuthungula.
Ungaphatha ukukhamba kwe-functional kuphela ngokuphulukisa isifo esibangele. Nge-scoliosis ehlelekile, isiguli siboniswa nsuku zonke sigqoke i-corset. Ukwelashwa kuvame ukuhlala iminyaka eminingana. Nge-scoliosis ukhethe ama-gymnastics yokwelapha, ukubhula, izinqubo ze-physiotherapeutic, ukwelula. Iphumelela ekwelapheni kwe-sanatorium no-spa. Ingane inconywa ukudla okucebile amavithamini, ukulala ngokwanele, imisebenzi ejwayelekile yangaphandle, imidlalo yangaphandle.
Kufanele ngibone nini udokotela?
Ukuqaphela ukuvuthwa komgogodla, thintana nodokotela. Udokotela uzohlola umgogodla, uzokwenza i-x-ray. Khona-ke isiguli sikhethwe i-corset. Ngesikhathi isiguli sikhula, kufanele ahlolwe njalo udokotela.
Njalo uvakashele izivivinyo zokuvimbela.
Ngokuvamile umgogodla ugobile ezinganeni zonyaka wesikole. Abazali kufanele baqaphele lokhu, baphathe imidlalo yokuzivocavoca nezingane, baqaphe ukuhamba kwabo. Phakathi nesikhathi sokukhula, umgogodla ongaphathiswa usuke uphazamiseka ngokwengeziwe. Uma inqubo yokukhula ingaqediwe, ngisho nangomvuthwandaba omncane, uhlobo olubi lwe-scoliosis lungakha.
Ingabe ukushukela kwesifo sikingozi?
I-degree encane ye-deformation ayingozi. Nge-scoliosis eyaziwa, umuntu uhamba ngobunzima, umsebenzi wenhliziyo namaphaphu uphazamiseka.
Ungazivikela kanjani ekuzileni kwe-scoliosis?
Akunakwenzeka ukuzivikela e-scoliosis, kodwa ngokushesha ukwelashwa kuqala, kancane kuzoba yizifo.
Ukugwema izinkinga ezingenzeka, njalo ubuke ukuma kwakho. Phela, kusukela nje kokuhamba kwesikhathi, impilo yomgogodla yakho incike, futhi nayo yonke impilo yenyama yonke. Buka futhi ukudla kwakho, uthathe amavithamini amaningi namaminerali okudla, uphuze uketshezi oluthe xaxa. Hlala okungenani amahora angu-8, ngoba yaziwa ukuthi iphupho eliphilile ngumzimba womuntu onempilo. Naka ukunakwa kwakho, futhi ukuhamba nge-scoliosis ngeke kukufice!
Lapho amazinyo obisi ephenduka kuze kube phakade
Ishidi lokunakekela izibhedlela
I-Badyaga ezivela emacaleni nezibazi
Indlela yokukhetha umfundisi ngesiNgisi
Amazambane ngenyama enamanzi
I-Anti-cellulite algae yokufaka
U-Olga Cabo - impilo yomuntu siqu
Kungani ngifunga ebusuku? Ingxenye 2
Idayisi «I-Caramel + vanilla»